Sida Loogu Tayeeyo Cinwaanadaada Cinwaan ee SEO (Tusaalooyin)
Ma ogtahay in boggaagu yeelan karo cinwaano badan iyadoo kuxiran meesha aad rabto inaad kusoo bandhigto? Waa run… halkan waxaa ku yaal afar cinwaan oo kala duwan oo aad ku heli karto hal bog oo ku jira nidaamka maareynta maaddadaada.
Cinwaanka Cinwaanka - HTML-ka lagu soo bandhigo barta biraawsarkaaga oo la muujiyo laguna muujiyo natiijooyinka raadinta.
Title Title - cinwaanka aad siisay boggaaga nidaamka maareynta maareyntaada si aad si fudud ugu hesho.
Bogga cinwaanka - sida caadiga ah sumadda H1 ama H2 ee dusha boggaaga taasoo u oggolaaneysa martidaada inay ogaadaan bogga ay ku jiraan.
Cinwaan Kooban Rich - cinwaanka aad rabto inaad soo bandhigto markay dadku ku wadaagaan boggaaga baraha bulshada isla markaana lagu soo bandhigo aragga hore. Haddii qayb yar oo taajir ahi aysan joogin, barnaamijyada bulshada ayaa sida caadiga ah u gudbaya sumadda cinwaanka.
Waxaan badanaa wanaajiyaa mid kasta oo ka mid ah kuwan markaan daabacayo bog. Dhanka bulshada, waxaan ku qasbi karaa. Raadinta, waxaan rabaa inaan hubiyo inaan adeegsanayo ereyada muhiimka ah. Mawduucyada, waxaan rabaa inaan caddeeyo waxa ku saabsan waxyaabaha soo socda. Gudahana, waxaan rabaa inaan awood u yeesho inaan helo boggeyga si fudud markaan raadinayo nidaamka maareynta maadada. Maqaalkani, waxaan diiradda saari doonnaa wax ka beddelkaaga cinwaanka cinwaanka makiinadaha raadinta.
Taariikhda Title, shaki la'aan, waa cunsurka ugu muhiimsan bogga marka ay timaado in si sax ah loo muujiyo waxa ku jira ereyada raadinta ee aad raadineyso in laga helo. Iyo jacaylka waxaas oo dhan SEO… Fadlan cusbooneysii cinwaanka boggaaga hoyga laga soo bilaabo Bogga ugu weyn. Waan cabsanayaa mar kasta oo aan arko degel ayan ku habboonayn cinwaanka bogga guriga! Waxaad la tartameysaa hal milyan oo bog oo kale oo loo yaqaan Home!
Immisa Astaamo Ayaa Google Ku Soo Bandhigaa Cinwaan Tag ah?
Ma ogtahay in hadii cinwaankaaga cinwaanku ka bato 70 xaraf oo Google isticmaali karo waxyaabo ka duwan boggaaga halkii? Hadana haddii aad dhaafto 75 xaraf, Google ayaa usocota iska dheji nuxurka ka dib 75 xaraf? Calaamadda cinwaanka oo si habboon loo qaabeeyey waa inay ahaataa inta udhaxeysa 50 ilaa 70 xaraf. Waxaan u jiheystaa inta udhaxeysa 50 ilaa 60 xaraf madaama raadinta moobiilka laga yaabo inay jaraan dhowr astaamo oo kale.
Dhinaca kale ee miisaanka, waxaan arkaa shirkado badan oo isku dayaya inay xirxiraan oo ay buuxiyaan macluumaad badan oo aan loo baahnayn ama ballaadhan oo ku jira cinwaanka cinwaanka. Kuwo badan ayaa dhigay magaca shirkadda, warshadaha iyo sidoo kale cinwaanka bogga. Hadaad sifiican uguquruxsantahay adiga keywords calaamadeysan, cinwaanadu uma baahna inay ku jiraan magaca shirkaddaada.
Waxaa jira dhowr ka reeban, dabcan:
Waxaad leedahay a sumadda weyn. Haddaan ahay New York Times, tusaale ahaan, waxaan u maleynayaa inaan ku daro.
Waxaad ubaahantahay wacyigalin sumadeed oo ay leeyihiin content weyn. Had iyo jeer waxaan tan ku sameeyaa macaamiisha da'da yar ee dhisaysa sumcad waxayna si xoog leh u maalgashadeen waxyaabo waaweyn.
Waxaad leedahay magac shirkadeed oo runti ah waxaa kujira erey muhiim ah. Martech Zone, tusaale ahaan, waxay ku imaan kartaa anfacaya tan iyo MarTech waa eray guud ahaan la raadsado.
Tusaalooyinka Tag Tag Cinwaanka Guriga
Markii aan wanaajinayo bog guri, waxaan caadi ahaan isticmaalaa qaabka soo socda
ereyada muhiimka ah ee sharraxaya wax soo saarkaaga, adeeggaaga, ama warshadahaaga | magaca shirkadda
Jajabka CMO, La-Taliyaha, Afhayeenka, Qoraa, Podcaster | Douglas Karr
Kordhi Awoodaada Iibka iyo Suuq Geynta Suuqgeynta | Highbridge
Tusaalooyinka Tag Ciwaanka Juqraafi
Qiyaas ahaan seddex meelood meel dhammaan raadinta moobiilka Google waxay la xiriiraan goobta sida ay tahay Blue Corona. Markii aan u hagaajinayo cinwaanka Cinwaanka bogga juqraafi ahaan, waxaan caadi ahaan u isticmaalaa qaabka soo socda:
ereyada muhiimka ah ee sharaxaya bogga | deegaanka juqraafi ahaan
Adeegyada Naqshadeynta Macluumaadka | Indianapolis, Indiana
Tusaalooyinka Cinwaanka Bogga Mawduuca
Markii aan u hagaajinayo Cinwaanka Cinwaanka bogga mawduuca, waxaan caadi ahaan u isticmaalaa qaabka soo socda:
ereyada muhiimka ah ee sharaxaya bogga | qaybta ama warshadaha
Ku habboonaanta Bogga Soo Degitaanka | Bixi Adeegyada Halkii Taabasho
Su'aalaha Way Ku Shaqeeyaan Si Wacan Tags
Ha iloobin in isticmaaleyaasha mashiinka raadinta ay qarka u saaran yihiin inay ku qoraan su'aalo faahfaahsan hadda mashiinnada raadinta.
Qiyaastii 40% dhammaan weydiimaha khadka tooska ah ee laga raadiyo Mareykanka waxay ka koobnaayeen laba eray oo muhiim ah.
In kabadan 80% raadinta khadka tooska ah ee Mareykanka waxay ahaayeen seddex erey ama kabadan.
In kabadan 33% weydiimaha raadinta Google waa 4 + erey dheer
Qoraalkan, waxaad ka heli doontaa cinwaanka:
Sida Loogu Tayeeyo Cinwaankaaga Cinwaanka ee SEO (tusaalooyin)
Isticmaalayaasha ayaa adeegsanaya Yuu yahay, Waa maxay, Sababta, Goorma, iyo Sidee su'aalahooda raadinta oo aad uga badan sidii hore. Lahaanshaha cinwaan su'aal oo u dhiganta weydiinta raadinta ayaa ah hab fiican oo si qumman loo garto loona kaxeeyo qaar ka mid ah taraafikada raadinta bartaada.
Meelo kale oo badan ayaa wax ka qoray astaamaha cinwaanka iyo cinwaanka cinwaanka SEO mana hubo inaan waligood la tartami doono iyaga maaddaama boggooda ay ku badan yihiin ereyada la xiriira SEO. Marka, waan ku daray oo leh Tusaalooyin si aan isugu dayo inaan u kala saaro qoraalkeyga oo aan kexeeyo qasabno badan!
Maaha inaad ka xishooto adeegsiga jilayaasha ugu badan ee suurtogalka ah. Adeegsiga ereyada muhiimka ah ee aadka diirada loo saaray marka hore, oo ay ku xigto ereyo balaaran oo soo socda, waa dhaqanka ugu fiican.
Cinwaanka Taabashada Cinwaanka ee WordPress
Haddii aad ku jirto WordPress, qalabyada sida Xisaabta SEO plugin kuu ogolaanaya inaad habeyso cinwaankaaga boostada iyo kan boggaaga labadaba. Labaduba way kala duwan yihiin. Iyada oo leh bogga WordPress, cinwaanka boostada ayaa sida caadiga ah ku dhex jira cinwaanka cinwaanka jirka qoraalka, halka cinwaanka boggaagu yahay cinwaanka cinwaanka taas oo ay qabtaan matoorada raadinta. La'aanteed plugin SEO ah WordPress, labaduba waxay noqon karaan isku mid. Xisaabta Xisaabta wuxuu kuu oggolaanayaa inaad qeexdo labadaba… si aad uga faa'iideysato cinwaan qasab ah iyo cinwaan dheer bogga dhexdiisa - laakiin wali waxay ku adkeyneysaa sumadda cinwaanka bogga dhererka habboon. Oo waxaad arki kartaa horudhac iyada ah oo leh tirinta astaamaha:
60% raadinta Google hadda waxaa lagu sameeyaa moobilka sidaa darteed Xisaabta Xisaabta sidoo kale wuxuu bixiyaa horudhac moobayl (badhanka gacanta midig ee sare):
Haddii aadan haysan qalab aad ku hagaajin karto jeebkaaga hodanka ah ee warbaahinta bulshada, cinwaanka cinwaanka waxaa badanaa lagu muujiyaa aaladaha warbaahinta bulshada markii aad wadaagto xiriiriye.
Samee cinwaan kooban, oo kugu kalifaya qasab qasabno! Diirada saar ereyada muhiimka ah waxa aad rumaysan tahay in booqdaha uu diiradda saari doono waxna aan ka badneyn. Ha iloobin inaad tayadoodii sharaxaadda meta si aad u wado isticmaaleha raadinta si aad u gujiso.
Talo Pro: Kadib markaad daabacdo boggaaga, hubi inaad aragto sidaad usbuucyo yar usameyso aalad sida Xeebaha. Haddii aad aragto in boggaagu uu si wanaagsan ugu kala sarreeyo iskudhaf ka duwan ereyada muhiimka ah… dib u qor cinwaankaaga cinwaanka si uu ugu dhowaado (haddii ay khuseyso, dabcan). Tan waxaan ku sameeyaa markasta qoraaladayda waxaanan daawadaa sicirka-guji ee Raadinta Console oo sii kordhaya!
Afeef: Waxaan u adeegsanayaa xiriirinteyda xiriirka Xeebaha iyo Xisaabta Xisaabta kor.
Tags: htmlHagaajintacinwaanka boggadarajo xisaabayna search engineSEOhoryaalkajilayaasha sumadda cinwaankakeywords keyworddhererka sumadda cinwaankahagaajinta sumadda cinwaankacinwaanka summadaha cinjirka hodanka ahcinwaanka cinwaanka seocinwaanka cinwaankaereyada ku jira weydiimaha raadinta
Fahamka Caqabadaha (iyo Niyad-xumada) ee Naqshadeynta Iimaylka HTML
Oktoobar 16, 2012 at 9:34 AM
Tilmaamaha cinwaanku waa curiyaha ugu muhiimsan uguna muhiimsan waana darajo darajo. Degello badan ayaa khalad ka sameeya luminta meeshan iyagoo isticmaalaya oo keliya magaca shirkadda. Waa inay adeegsataa ereyada muhiimka ah si ay u sharaxdo waxa ku yaal bogga.
Nov 1, 2012 at 1: 21 AM
qoraal cabsi leh oo faahfaahsan… Mustaqbalka, tan waxaa loo gudbin karaa Kitaabka Qudduuska ah ee Cinwaangelinta Cinwaanka Sacabka ..
Nov 1, 2012 at 1: 38 AM
Aad baa loogu mahadnaqay @wiseStep!
Ma doonayo inaan sii wado cinwaankayga blog ka dib cinwaanka boggeyga laakiin ma aqaano sida loo sameeyo. Waxaan isticmaalayaa All In One Seo Pack oo waxaan ka saaray% blog_title% oo ahaa% %_title% kadib, hada waa% page_title%. Laakiin wali way socotaa. In cinwaanka cinwaanka header.php uu yahay, iyo bogga.php cinwaankiisu yahay. Maxaan sameeyaa, markaa cinwaanka balooggu ma sii socon doono cinwaanka bogga kadib.
Waxaan si daacad ah uga dhoofin lahaa dejintaada Dhamaan All One SEO Pack Plugin oo waxaan rakibayaa Yoast SEO Plugin ee WordPress. Waad ku soo dejin kartaa dejimaha halkaas iyo waxa aad kor ku hayso waa inay shaqeeyaan.